ဧည့အမှန်တရား: ထွ-Slave, စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး, ဝန်ကြီး
ဧည့အမှန်တရား: စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး, ဝန်ကြီး, ကထိက
စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး, ဝန်ကြီးထွ-Slave, အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ
ဧည့အမှန်တရားအကျော်ကြားဆုံးအနက်ရောင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ 1827 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ပြည်နယ်ပညတ်တရားအားဖြင့်ကျွန်ခံနေရာကနေ Emancipated သူကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖွစျလာသူတစ်ဦးနယျလှညျ့တရားဟောဆရာကြီးနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၌တည်၏။ 1864 ခုနှစ်တွင်သူမသည်သူ၏အိမ်ဖြူတော်ရုံးခန်း၌အာဗြဟံလင်ကွန်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ရက်စွဲများ: အကြောင်းကို 1797 - နိုဝင်ဘာလ 26, 1883
ကျနော်တို့တည်းခိုအမှန်တရားအဖြစ်ကိုသိထိုမိန်းမသည် (မိမိအဘ၏ပိုင်ရှင် Baumfree ပြီးနောက်) Isabella Baumfree အဖြစ် New York မှာကျွန်စနစ်သို့မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူမ၏မိဘများယာကုပျနှငျ့ဧလိရှဗက် Baumfree ခဲ့ကြသည်။ သူမသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရောင်းချခဲ့သည်နှင့် Ulster ကောင်တီအတွင်းရှိဆရာယောဟနျ Dumont မိသားစုကကျွန်ခံရစဉ်သောမတ်စ်လည်း Dumont အားဖြင့်ကျွန်, လက်ထပ်နှင့် Isabella ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာဟောင်းများကို။ သူမသည်သောမတ်စ်နှင့်အတူသားသမီးငါးယောက်ရှိခဲ့သည်။ 1827 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ဥပဒလူအပေါင်းတို့ကျေးကျွန် emancipated, ဒါပေမယ့် Isabella ပြီးသားဣဇာက်သည်ဗန် Wagenen ၏မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်မယ့်, သူမ၏ခင်ပွန်း left နှင့်သူမ၏အငယ်ဆုံးကလေးနဲ့အတူပြေးခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီသူမခေတ္တအသုံးပြုခဲ့ - - ထိုဗန် Wagenens များအတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သူမ Dumont မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Alabama တှငျကျွန်ခံရန်သူမ၏သားသမီးများ၏တဦးတည်းကိုရောင်းခဲ့ကွောငျးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသားက New York ဥပဒေအရ emancipated ခဲ့ကတည်းက Isabella တရားရုံးတွင်တရားစွဲနှင့်သူ၏ပြန်လာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူမသည် 1832 ခုနှစ်ဿိအမည်ရှိဘာသာရေးပရောဖကျ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာလာ၏။
သူမသည်ထို့နောက်သူမသည်သာအနက်ရောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှိရာဿိကဦးဆောင်နေတဲ့မက်သဒစ် perfectionist အသိုင်းအဝိုင်းမှပြောင်းရွေ့နှင့်အနည်းငယ်အဖွဲ့ဝင်များပြုပြင်လူတန်းစားဖြင့်ပြီးကြ၏။ ကွန်မြူနတီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ improprieties နှင့်ပင်လူသတ်မှု၏စွပ်စွဲချက်နှင့်အတူနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျသွားသည်။ Isabella သူ့ကိုယ်သူအခြားအဖွဲ့ဝင်တဦးအဆိပ်သင့်စေစွပ်စွဲဖြင့်, သူသည် 1835 ခုနှစ်ရေဖျက်မှုများအတွက်အောင်မြင်စွာတရားစွဲခံခဲ့ရသည်။
သူမသည် 1843 အထိအိမ်ထောင်စုအမှုထမ်းအဖြစ်သူမ၏အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။
ဝီလျံ Miller ကတစ်ထောင်စုနှစ်ညျပရောဖကျတို့, ခရစ်တော်သည် 1837 ၏ထိတ်လန့်စဉ်နှင့်အပြီးစီးပွားရေးမငြိမ်မသက်ကြားတွင်, 1843 ခုနှစ်တွင်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ 1, 1843 တွင်, Isabella ဒီညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျော၏ညွှန်ကြားချက်အပေါ်ဖြစ်ယုံ, နာမည်တည်းခိုအမှန်တရားယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် millerite စခန်းများတွင်တစ်လှည့်လည်ရာတွင်တစ်နယ်လှည့်ဟောပြောသူ (သူမ၏အသစ်သောအမည်, တည်းခို၏အဓိပ္ပါယ်ကို) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မဟာစိတ်ပျက်စရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်တဲ့အခါမှာ - ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကိုအဆုံးသတ်မပြုခဲ့ - သူအားပယ်ဖျက်ရန်နှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသူအများအပြားအားဖြင့် 1842 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယင်း Northampton အသင်းမှတစ်ဦး utopian အသိုင်းအဝိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
အခုတော့ကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်သူမကတစ်ဦးလူကြိုက်များ circuit ကိုစပီကာဖွစျလေ၏။ သူမသည်နယူးယော့ခ်စီးတီးရှိ 1845 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ပထမဦးဆုံး antislavery မိန့်ခွန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကွန်မြူနတီ 1846 ခုနှစ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး, သူက New York မှာပန်းခြံလမ်းပေါ်အိမ်တအိမ်ဝယ်လိုက်တယ်။ သူမသည်သံလွင် Gilbert မှသူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာနှင့်သူမသည်သူမ၏ပေါင်နှံချွတ်ဆပ်ဖို့, စာအုပ်, တည်းခိုအမှန်တရား၏ Narrative ထံမှဝင်ငွေကိုသုံး 1850. ခုနှစ်ဘော်စတွန်ထဲမှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
1850 ခုနှစ်တွင်သူမလည်းစကားပြောကိုစတင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေးခွင့်အပေါ် ။ သူမ၏အကျော်ကြားဆုံးမိန့်ခွန်း, ငါအမျိုးသမီးသည်မဟုတ်လော တစ်ဦးမှာ 1851 ခုနှစ်တွင်ပေးထားခဲ့သည် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကို အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၌တည်၏။
ဧည့အမှန်တရားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Harriet Beecher Stowe အတ္တလန္တိတ်လစဉ်များအတွက်သူမ၏အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်များနှင့်အမှန်တရားရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဧည့အမှန်တရား၏ Narrative အသစ်မိတ်ဆက်ရေးသားခဲ့သည်တဲ့သူ။
ဧည့အမှန်တရားမီချီဂန်သို့ပြောင်းရွှေ့သော်လည်းအခြားဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဆက်နွယ်ဒီတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူမသည် millerite နှင့်အတူဖော်ရွေတဦးတည်းအမှတ်, method ထဲကကြီးပြင်းတဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုမှာနောက်ပိုင်းတွင်သတ္တမ day Adventist ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတည်းခိုအမှန်တရားစဉ်အတွင်းအနက်ရောင်တပ်ရင်းများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အဝတ်အစားပံ့ပိုးမှုများကိုထမြောက်တော်မူ, သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ သည်အာဗြဟံလင်ကွန်း Lucy N. Colman နှင့်ဧလိရှဗက် Keckley နေဖြင့်စီစဉ်ပေးမယ့်အစည်းအဝေးအတွင်း, 1864 ခုနှစ်တွင်အိမ်ဖြူတော်မှာ။ အဲဒီမှာနေစဉ်, သူမကပြိုင်ပွဲအားဖြင့်လမ်းပေါ်ကားများ segregated သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်တည်းခိုအမှန်တရားနောက်တဖန်အနောက်မျက်နှာရှိအခြို့အချိန်ဟာ "Negro ပြည်နယ်" အတွက်ဆော်သြ, ကျယ်ပြန့်စကားပြောသည်။
သူမသည်အဖြူရောင်ပရိသတ်တွေရန်နှင့်အများအားဖြင့်ဘာသာရေးအပေါ်အဓိကအားဖြင့် "Negro" နှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးစကားနဲ့ပေါ် ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်း ချက်ချင်းပြည်တွင်းစစ်ကြီးပြီးနောက်သူမကစစ်ပွဲကနေအနက်ရောင်ဒုက္ခသည်များအတွက်အလုပ်အကိုင်ပေးအားထုတ်မှုစုစည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း။
သူမ၏မြေးများနှင့်အဖော်နေမကောင်းလဲသေတည်းခိုအမှန်တရားသူမ၏ကျန်းမာရေးဆိုးရွားခြင်းနှင့်သူမ၏ခြေထောက်ပေါ်ကူးစက်အနာတစ်ခုတိုက်ပွဲ Creek အဘိဓါန် sanitorium အတွက် 1883 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားဘယ်မှာမီချီဂန်မှပြန်လာသောအခါ, 1875, သည်အထိ active ။ သူမသည်အလွန်ကောင်းစွာ-တက်ရောက်ခဲ့သည်အသုဘပြီးနောက်တိုက်ပွဲ Creek အဘိဓါန်, မစ်ရှီဂန်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
နှစ်ဦးအားမဲပေးခွင့်ရှိရေးလှုပျရှားမှု အမှန်တရားရဲ့မိန့်ခွန်း၏စကားဗားရှင်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့မာသ Gruening အားဖြင့် -1912 ဆောင်းပါး။ "ဒါဟာအားလုံး suffragists, သူတို့ရဲ့လိင်သို့မဟုတ်အရောင်သမျှကိုနားလည်ရမယ်ဘာလဲ - ။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှတို့သည် disfranchised ဘုံအကြောင်းမရှိရှိသည်"
ဘားနတ်, Jacqueline ။ Freedom ကိုခါနီးခရီး: တည်းခိုအမှန်တရား၏ပုံပြင်။
ထင်ရှားအမေရိကန်အမျိုးသမီးများ 1607-1950 Volume ကို III ကို PZ အတွက် Saunders Redding "တည်းခိုအမှန်တရား" ။ အက်ဒွပ်တီယာကုပျ, အယ်ဒီတာ။ Janet Wilson ကဂျိမ်းစ်နှင့်ပေါလုအက်စ် Boyer, လက်ထောက်အယ်ဒီတာများ။ ကင်းဘရစ်, မက်ဆာချူးဆက်: Belknap စာနယ်ဇင်း, 1971 ။
Stetson, Erlene ။ ဘေးဒဏ်ကြီးအတွက်ဝါကြွားခြင်းသည်: တည်းခိုအမှန်တရား၏အဓိကလုပျငနျး။
အမှန်တရား, တည်းခို။ တည်းခို၏ဇာတ်ကြောင်း။
အမှန်တရား, တည်းခို။ တည်းခိုအမှန်တရား၏ဇာတ်ကြောင်း, ဒိုဗာတစ်ပတ်ရစ် Editions ။
ရာခေလသည် Carson Quotes
ဆယ်ပါးလောင်စာဆီချွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်: Two-wheel ဆီ Sippers
စထရွန်တီ - မီးပန်းအတွက် Element တွေကို
2016 Chevrolet ကား Camaro Convertible ဓာတ်ပုံကိုလှည့်လည်
Fairy နှင့် Little ကလူတွေက၏မျက်မှောက် - စစ်မှန်သောပုံပြင်များ
10 Tungsten အချက်အလက် - W သို့မဟုတ်အနုမြူနံပါတ် 74
Hot စားနပ်ရိက္ခာအပေါ်လေပြင်းတကယ်ဒါဟာ Cooler Make ပါသလား?
အဆိုပါသဒ်ဒါ Term '' Logophile '' အကြောင်းကိုလေ့လာပါ
ဒါဟာ Cupping Get လိုကဘာလဲ?
ဂေါက် Tees: တစ်ဦးနှိမ့်ချပစ္စည်းကိရိယာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သမိုင်း
အားလုံးအချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား NICKNAME 17
"အမေရိက၏ Next Top Model" Winners
သင်ကပိုမိုထိရောက်သောအသံစေမည်ဟုအသက် 15 စကား
ဂျာဗား၌ static Fields
သင့်ရဲ့ဂစ်တာ၏အရှင်းလင်းအသံထဲက Get လုပ်နည်း
Tupac Amaru ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
နာမည်ကြီးတွေထဲကနေအဲဒီ Quotes နှင့်အတူသင့်ရဲ့ 18 မွေးနေ့ကျင်းပ
Acupressure ဘဏ္ဍာ: လာအို Gong - Pericardium 8
တစ်ဘုရားကျောင်း Find လုပ်နည်း